Moanina Bodista avy any Japana miangaly mozika amin’ny vavany mba ‘hampitoniana ny fijaliana’ · Global Voices teny Malagasy
Moanina Bodista avy any Japana miangaly mozika amin'ny vavany mba ‘hampitoniana ny fijaliana’
Yogetsu Asakusa combines beatboxing beats with traditional Buddhist sutras Manambatra ny fidoboky ny beatboxing sy ny sutra Bodista nentim-paharazana i Yogetsu Asakusa
Voadika ny 08 Novambra 2020 5:15 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, नेपाली, русский, Nederlands, Қазақша, Español, Română , 한국어, Esperanto , Português, हिन्दी, English
Yogetsu Akasaka. Saripika tao amin'ny fantsona YouTube ofisialy.
Nahazo valisoa avy amin'ny mpihaino an-tapitrisany ilay moanina Japoney “namorona mozika hampihenana ny tebiteby sy hampitoniana ny fijaliana”. Mampiasa ny fitaovana loop station hanambarana sy hametahana ny beatboxing miaraka amin'ny hiran'ny Bodista ary avy eo nandefa ireo horonantsary tao amin'ny YouTube i Yogetsu Akasaka, moanina Zen Bodista, 37 taona. Efa nahatratra mpijery roa tapitrisa hatramin'ny fotoana nanoratana ny horonantsariny malaza indrindra hoe “Heart Sutra Live Looping Remix“.
Nalaza tao amin'ny YouTube tamin'ny volana Mey 2020 ny famoahana maoderina nataon'i Akasaka ilay Heart Sutra (Sutra Fo) (般若心経), izay raha ara-tantara dia iray amin'ny sutra fanta-daza sy be mpitia indrindra. Manambatra ny feo azo avy amin'ny loop sy ny fidoboky ny beatboxing ilay moanina Bodista sady mihira ireo karazana sutra Bodista nentim-paharazana, na soratra, ao amin'ny fantsony YouTube. Ny hanampy amin'ny fampitoniana ny fijaliana no tanjona, hoy i Akasaka.
Mamorona ‘mozika aho hampihenana ny fitaintainana’.
Mihirahira aho ho an'ny ‘fampitoniana ny fijaliana’.
Enga anie ho faly ny olona rehetra.
Talohan'ny naha-moanina azy, nonina tany ampitan-dranomasina i Akasaka ary nanao fampisehoana toy ny mpitsoka mozika mandehandeha. Tamin'ny taona 2009, nanomboka nanambatra ny beatboxing tamin'ny feon-kira ary nanomboka nanampy ny fihiran'ny Bodista tamin'ny fandaharan-kirany i Akasaka.
Monina any Tokyo i Akasaka ankehitriny, ary lasa moanina Bodista Zen izy tamin'ny taona 2015, nanaraka ny dian-drainy, izay mitarika tempoly any amin'ny Prefektiora ambanivohitr'i Iwate.
Araka ny nolazain'i Akasaka tamin'ny Vice:
Lasa moanina matetika ny olona any Japana satria mipetraka any amin'ny tempoly ny fianakaviany. Fa ho an'ny raiko dia olona tsotra fotsiny izy ary nanapa-kevitra ny ho moanina. […] Nahazo aingam-panahy aho ary nanapa-kevitra ny hahomby tamin'ny andraikitry ny raiko ankehitriny amin'ny maha-pretra azy ao amin'ny tempoly ao amin'ny Perfektioran'i Iwate.
Na dia talohan'ny nampalaza azy tamin'ny karazany vaovao tamin'ilay Sutra fo aza dia efa nahasarika ny saina ny mozikan'i Akasaka tany Japana. Niseho tany amin'ny Techno Hosho 2019 izany, fampisehoana Chokaigi lehibe kokoa anisan'ny fanao isan-taona, izay manambatra ny fitaovana fombafomba bodista, ny mozika techno ary fandefasana lahatsary.
Tsy i Akasaka irery no mpanakanto manafangaro ny Bodisma amin'ny mozika maoderina. Eto, nandritra ny hetsika Techno Hosho tamin'ny taona 2018, manafangaro ny mozika techno sy ny mozika mahasondriana amin'ny hiran'ny Bodista ny mpanakanto iray mitondra ny anarana hoe Gya:
Nandefa horonantsary ahitana sary haingoana amin'ny jiro tao amin'ny Techno Hosho (tamin'ny volana aprily 2018) ny mpisera.
Sary haingoana amin'ny jiro momba avy amin'i #Gya. Hira: “Sanbutsu” (“fiderana hanomezam-boninahitra an'i Boddha “)
Azo jerena ao amin'ny YouTube ny “Heart Sutra Live Looping Remix” malaza be an'i Yogetsu Akasaka sy ireo hira hafa.
Mitantana kaonty Twitter mavitrika i Yogetsu Akasaka, ary hita ao amin'ny YouTube, Spotify, ary tambajotra amin'ny aterineto hafa ny mozikany.